﻿ सुचना प्रविधिका सामानहरु किन्दैहुनुहुन्छ ? पर्खनुस् इटहरीमा क्यान इन्फोटेक हुँदैछ
सुचना प्रविधिका सामानहरु किन्दैहुनुहुन्छ ? पर्खनुस् इटहरीमा क्यान इन्फोटेक हुँदैछ
इटहरी । सुचना प्रविधिका सामानहरु किन्दै हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने पर्खनुहोस् इटहरीमा क्यान इन्फोटेक मेला लाग्दै छ । मेलामा सुचना प्रविधिका सामानहरु विशेष छुटमा पाइने हुँदा खरीदकर्ताले विशेष लाभ उठाउन सक्छन् ।
कम्प्युटर व्यवसायीहरूको छाता संगठन क्यान इन्फोटेक सुनसरीको आयोजनामा आगामि माघ १ गतेबाट इटहरीमा प्रदेश स्तरीय क्यान इन्फोटेक मेला लाग्ने भएको छ । उक्त मेलाका लागि स्टल निर्माणहरू देखि मुख्य प्रायोजकहरूको टुंगो लागिसकेको र प्रचार प्रसारलाइ तिब्रता दिइरहेको क्यान सुनसरीले जनाएको छ ।
बढ्दो सुचना प्रविधिको बिकास र त्यसबाट मानव जिवनमा पुग्ने फाइदा तथा क्षति र शुरक्षित उपभोगको बिषयमा ज्ञानमुलक सीप र जानकारी गराउने उद्देश्यसहित क्यान इन्फोटेक मेलाको आयोजना गर्न लागिएको हो ।
अन्य वर्षहरूको तुलनामा यो वर्ष फरक र बिशेष ढंगबाट मेला सम्पन्न गराउन क्यान महासंघ सुनसरी लागि परेको देखिन्छ । यो पटकको मेलामा अवलोकन गर्न आउने आन्तरीक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई दैनिक लक्कि ड्र मार्फत आकर्षक उपहारको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ ।
मेलामा पर्यटकहरूलाई लक्षित गरी विभिन्न आकर्षक उपहारहरू राखेको जनाइएको छ । ५ गतेसम्म चल्ने मेलाको मुख्य प्रायोजन प्रभु पे ले गर्ने भएको छ भने एसोसिएट प्रायोजकमा वर्ल्डलिंक कम्युनिकेशन लिमिटेड, अफिसियल इन्स्योरेन्स प्रभु इन्सोरेन्सले प्रायोजन गर्ने भएको छ । मेलामा मुख्यतः पर्यटकहरूलाई लोभ्याउन रोबोट वार, आइटी म्युजियम, सेफ्टी एण्ड सेक्युरीटी सम्बन्धी बृहत प्रदर्शनी हुने बताइएको छ ।